Mafenide (မတ်ဖ်ဖီနိုဒ်) : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Mafenide (မတ်ဖ်ဖီနိုဒ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Mafenide ကို ပြင်းထန်စွာ မီးလောင်ခံရသော လူနာများတွင် ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ကုသရန် အတွက် သုံးသည်။ တစ်မျိုးတည်း သို့မဟုတ် အခြား ဆေးများနှင့် တွဲပြီး သုံးသည်။ Mafenide သည် အရေပြားတွင် လိမ်းသော ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ sulfa ပဋိဇီဝဆေး အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပွင့်သော ဒဏ်ရာတွင် ကူးစက်နိုင်သော ဘတ်တီးရီးယားကို သတ်ပေးသည်။ ဘတ်တီးရီးယားကို သတ်ပေးခြင်းဖြင့် အနာကျက်ခြင်းကို ပိုကောင်းစေသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် အရေပြားနှင့် သွေးထဲသို့ ဘတ်တီးရီးယား ပျံ့သွားခြင်းကို လျော့နည်းစေသည်။
Mafenide (မတ်ဖ်ဖီနိုဒ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဤဆေးကို မသုံးခင်နှင့် သုံးပြီးတွင် လက်ဆေးပါ။ ဤဆေးကို အရေပြားပေါ်တွင်သာ သုံးပါ။ ထိခိုက်သော နေရာကို သန့်စင်ပြီးပါက လက်အိတ်ဝတ်ပြီး ဤဆေးကို လိမ်းနိုင်သည်။ တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်မှ နှစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း လိမ်းနိုင်သည်။ အနာကို ပတ်တီးစည်းရန် မလိုအပ်ပါ။ ကုသမှု၏ ကြာချိန်သည် သင်၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေနှင့် တုံ့ပြန်မှုအပေါ် မူတည်သည်။
ဆရာဝန်က မရပ်ခိုင်းမချင်း ဤဆေး သုံးခြင်းကို မရပ်ပါနှင့်။
ဖြစ်နိုင်ပါက ဒဏ်ရာမှ သေဆုံးသော အရေပြားများ ကွာကျစေရန် အနည်းဆုံး တစ်နေ့ တစ်ကြိမ် ရေချိုးပါ။ ရေချိုးပြီးနောက် ဆေးကို ပြန်လိမ်းပါ။
အကျိုးကျေးဇူး အများဆုံး ရစေရန် ဆေးကို ပုံမှန် သုံးပါ။ နေ့စဉ် တူညီသော အချိန်တွင်သုံးပါ။
သင်၏ အခြေအနေသည် ပိုဆိုးလာပါက၊ ဒဏ်ရာ ပတ်လည်ရှိ အရေပြားတွင် နီရဲခြင်း/ နာကျင်ခြင်း ပိုဆိုးလာပါက ဆရာဝန်အား ပြောပါ။
Mafenide (မတ်ဖ်ဖီနိုဒ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
ခရင်မ်။ ဆေးဘူးထဲတွင် ထားပါ။ အလွန်ပူသော နေရာ (104F သို့မဟုတ် 40C အထက်) တွင် မထားပါနှင့်။
အထုပ်။ အေးမြပြီး ခြောက်သွေ့သော နေရာတွင် သိမ်းပါ။
Reconstituted solution: ဆေးဖျော်ပြီး ၄၈ နာရီအတွင်း သုံးပါ။
Mafenide တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Mafenide ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Mafenide (မတ်ဖ်ဖီနိုဒ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Mafenide မသုံးခင် သင်သည် ဓါတ်မတည့်မှုများ ရှိပါက ဆရာဝန်အား ပြောပါ။ ဤဆေးတွင် ဓါတ်မတည့်မှု သို့မဟုတ် အခြား ပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်သော ပစ္စည်းများ ( parabens, sulfites စသော တာရှည်ခံ ပစ္စည်းများ) ပါဝင်သည်။ အသေးစိတ် သိရှိရန် ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ဤဆေး မသုံးခင် သင်၏ ကျန်းမာရေး ရာဇဝင် အထူးသဖြင့် အဆုတ် ရောဂါများ ( ဥပမာ ပန်းနာရင်ကြပ်)၊ ကျောက်ကပ် ရောဂါ၊ ဓါတ်ပြောင်းလဲမှု ရောဂါများ ( ဥပမာ glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency-G6PD)၊ သွေးရောဂါ ရာဇဝင်များကို ဆရာဝန်အား ပြောပြပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တွင် ဤဆေးကို အမှန်တကယ် လိုအပ်မှသာ သုံးသင့်သည်။ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုးများကို ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ဤဆေးသည် မိခင်နို့မှ ဖြတ်သွားသလား မသိရှိပါ။ မိခင် နို့မတိုက်ခင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Mafenide (မတ်ဖ်ဖီနိုဒ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ်တွင် Mafenide သုံးလျှင်ရနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာထားခြင်း မရှိပါ။ Mafenide မသောက်မီ အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်ကို ချိန်ညှိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။ Mafenide သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အစားအသောက် နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက် အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်။
Mafenide (မတ်ဖ်ဖီနိုဒ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
နာကျင်ခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်းနှင့် နီရဲခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ပိုဆိုးလာပါက ဆရာဝန်အား ချက်ချင်းပြောပါ။ ဤဆေး၏ ကောင်းကျိုးသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေထက် ပိုများသောကြောင့် ဆရာဝန်က ဤဆေးကို ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤဆေးသုံးသော လူများစွာတွင် ပြင်းထန်သော ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ မဖြစ်ပါ။
အဖြစ်နည်းသော်လည်း ပြင်းထန်သော ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်အား ချက်ချင်းပြောပါ။ ဥပမာ အရေပြား ဖောင်းကြွခြင်း၊ သွေးထွက်ခြင်း၊ အသက်ရှူ မြန်ခြင်း၊ မအီမသာ ဖြစ်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ တုန်ရီခြင်း၊ တက်ခြင်း။
ရှားပါးပြီး ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဥပမာ အားနည်းခြင်း၊ ဆီးအရောင် မည်းခြင်း၊ အစာအိမ် အောင့်ခြင်း၊ လက်/ ခြေထောက်/ ကျော နာခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်း မြန်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပါက ဆရာဝန်အား ချက်ချင်းပြောပါ။
ဤဆေးနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုသည် ရှားသည်။ သို့သော် ဓါတ်မတည့်မှု၏ လက္ခဏာများ ဥပမာ အဖုအပိမ့်များ၊ ယားယံခြင်း/ ရောင်ရမ်းခြင်း ( အထူးသဖြင့် မျက်နှာ၊ လျှာ၊ လည်ချောင်းတွင်)၊ မူးဝေခြင်း၊ အသက်ရှူရ ခက်ခြင်း တို့ ဖြစ်လာပါက ကျန်းမာရေး ကုသမှု အမြန်ရယူပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Mafenide (မတ်ဖ်ဖီနိုဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Mafenide သည် သင်လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆေး တုံ့ပြန်မှုများ ကို ရှောင်ရန် သင်အသုံးပြုနေသော ဆေးများ အားလုံးကို စာရင်းပြုပြီး ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်အား ပြပါ။ ဘေးကင်း စေရန် ဆရာဝန် သဘောတူမှုမပါဘဲ ဆေးပမာဏ ကို ပြောင်းခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ စတင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Mafenide (မတ်ဖ်ဖီနိုဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Mafenide သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Mafenide (မတ်ဖ်ဖီနိုဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Mafenide သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။ သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Mafenide (မတ်ဖ်ဖီနိုဒ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဘတ်တီးရီးယား ကူးစက်မှု အတွက် ပုံမှန်လူကြီး ပမာဏ
ဆေးရည်။ ပတ်တီးကို ဤဆေးရည် စိမ်ပြီး ဒဏ်ရာပေါ် အုပ်ပါ။ ပတ်တီးကို ၄ နာရီတစ်ခါ ဆေးရည် ထိုးပေးပါ။
ဓါတ်မတည့်မှု ဖြစ်ပါက ကုသမှုကို ရပ်ပါ။
အဝတ်စို ပတ်ထားသောကြောင့် အရေပြား ပျော့ပြဲ နိုင်သည်။
ကုသမှုကို အနာကျက်လာသည်အထိ ( ၅ရက်လောက်) ဆက်ပေးသင့်သည်။
အသုံးပြုပုံ။ ဘတ်တီးရီးယား ကူးစက်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် ဖြည့်စွက် ကုထုံးအဖြစ် သုံးသည်။
ခရင်မ်။ လက်အိတ်ဝတ်ပြီး မီးလောင်ဒဏ်ရာပေါ်တွင် တစ်နေ့ တစ်ကြိမ်မှ နှစ်ကြိမ် လိမ်းပါ။ 1/16 လက်မ အထူလောက် လိမ်းပါ။
လူနာ၏ လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဆေးမရှိတော့ပါက ခရမ်ကို ပြန်လိမ်းပါ။ မီးလောင်ဒဏ်ရာ ပေါ်တွင် တစ်ချိန်လုံး ဆေးရှိ နေအောင်ထားပါ။
ပတ်တီးစည်းရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် လူနာက လိုအပ်ပါက ပတ်တီး ပါးပါး စည်းနိုင်သည်။
ကုသမှုကို အနာကျက်လာသည်အထိ ဆက်ပေးသင့်သည်။
အသုံးပြုပုံ။ ဒုတိယနှင့် တတိယအဆင့် မီးလောင် ဒဏ်ရာများ ကုသမှုအတွက် ဖြည့်စွက်ကုထုံး အဖြစ် သုံးနိုင်သည်။
မီးလောင်ဒဏ်ရာ အတွက် ပုံမှန်လူကြီး ပမာဏ
ကလေးတွေအတွက် Mafenide (မတ်ဖ်ဖီနိုဒ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဘတ်တီးရီးယား ကူးစက်မှု အတွက် ပုံမှန်ကလေး ပမာဏ
3 လနှင့်အထက်။ ပတ်တီးကို ဤဆေးရည် စိမ်ပြီး ဒဏ်ရာပေါ် အုပ်ပါ။ ပတ်တီးကို ၄ နာရီတစ်ခါ ဆေးရည် ထိုးပေးပါ။
မီးလောင်ဒဏ်ရာ အတွက် ပုံမှန်ကလေး ပမာဏ
ဆေးရည်။ အသက်3လ အောက် လူနာများတွင် ဘေးကင်းမှု နှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အတည်ပြုထားခြင်း မရှိပါ။
Mafenide (မတ်ဖ်ဖီနိုဒ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Mafenide ကို အောက်ပါပုံစံ၊ ပြင်းအားများဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။
ဆေးရည် ဖျော်ရန်အတွက် အမှုန့်
Mafenide လိမ်းရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် လိမ်းပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် လိမ်းရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လိမ်းပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မလိမ်းပါနှင့်။
Mafenide Topical Dosage. https://www.drugs.com/dosage/mafenide-topical.html. Accessed July 9, 2018.
Mafenide Acetate Cream. https://webmd.com/drugs/2/drug-6094-9130/mafenide-topical/mafenide-acetate-cream-topical/details. Accessed July 9, 2018.